WAR DEG DEG AH: Madaxweyne Farmaajo oo xilka ka qaadaya guddoomiyaha gobolka Banaadir kadib markii… – Puntland News
Home 2017 February 12 Somali News WAR DEG DEG AH: Madaxweyne Farmaajo oo xilka ka qaadaya guddoomiyaha gobolka Banaadir kadib markii…
WAR DEG DEG AH: Madaxweyne Farmaajo oo xilka ka qaadaya guddoomiyaha gobolka Banaadir kadib markii…
February 12, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
Muqdisho 12 February 2017:- Ilo ku dhow madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegaya inuu wado qorshe uu xilka kaga qaadayo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale iyo mas’uuliyiin ka hoos shaqeysa.
Inkastoo madaxweyne Farmaajo si rasmi ah xafiiska madaxtooyada ula wareegin haddan waxaa jira guux soo baxaya oo sheegaya in gasha seefta ku jirta ee Farmaajo bixitaankeeda ugu horeeya ay ku dhaceyso Guddoomiye Madaale.
Mas’uul ku dhow madaxweynaha cusub ee la doortay oo diiday inaan isticmaalno magacadooda ayaa inoo sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo damacsan yahay isbedel siyaasadeed iyo mid hogaamin,isagoona balan qaadkiisii siyaasadeed ay qeyb ka ahaayeen.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa saaxiib dhow la ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo looga adkaaday doorasho ka dhacday Muqdisho.
One thought on “WAR DEG DEG AH: Madaxweyne Farmaajo oo xilka ka qaadaya guddoomiyaha gobolka Banaadir kadib markii…”
Nuh February 15, 2017 at 2:42 pm · Edit
Wa meediyhahow Allah ka baqa oo saadaasha daaya”waa la yiri waa waxa indhahaa inoo yeelay”war umada aad iska horkeeneysaan daaya iyo debka aad hurineysaan. War hadal inta uu afkaada ku jiro ayuu amaan yahay ee ka fajignaada inta aydaan soo gudbin. War maanta marxalad adag ayaa Dalku ku jiraa lagu samata bixinayo Dalkan, ee qeyb ka noqda, walibana lagu doonayo in Derejadii luntay lagu soo celiyo. Intaa Allah ha idin garansiiyo (Aamiin)